सत्ताको दुरुपयोग गरेर ३ भारतीय व्यापारीले यसरी कब्जा गरे दक्षिण अफ्रिकाको स्रोत, साधन – Clickmandu
नेपालमा झन् ठूलो खतरा, यसरी झाँगिदैछ आसेपासे पुँजीवाद
क्लिकमान्डु २०७७ चैत ८ गते १३:२४ मा प्रकाशित
काठमाडौं । गत शुक्रबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा एउटा कार्यक्रम आयोजना गरियो । निमन्त्रणा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट आर्थिक सल्लाहकार तथा पूर्वराज्यमन्त्री मोतीलाल दुगड थिए । पाहुना थिए, देशका विशिष्ठ व्यवसायीहरु ।
१०० भन्दा बढी वर्षदेखि व्यवसायमा साम्राज्य स्थापना गरेका मारबाडी समूदायलाई खुसी बनाउनका लागि ‘मारबाडी भोज’को आयोजना गरिएको थियो । यसका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रस्ताव गरेका थिए ।
कार्यक्रम अवधिभर विभिन्न व्यवसायिक संघ-संस्थाका नेतृत्वकर्ताहरुले देशको अर्थतन्त्र, वर्तमान अवस्था र समस्याका बारेमा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले व्यवसायीहरुलाई सम्बोधन गर्दै आफ्ना भनाइ राखेका थिए ।
कार्यक्रमको अन्त्यसम्म पार्टी प्रवेशको कार्यक्रम राखिएको थियो ।
लामो समय कांग्रेस भएर व्यापारिक लाभ लिएका र यसअघि २ पटकसम्म नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षको निर्वाचनमा हारेका व्यवसायी किशोर प्रधानको नेतृत्वमा २३५ जना व्यवसायीहरुलाई ओलीले एमाले पार्टी प्रवेश गराए ।
राजनीतिमा व्यवसायी र नेताहरुको बीचमा सम्बन्ध बन्दै र भत्कँदै जानु कुनै नौलो कुरा होइन । निर्वाचनमा पैसाको बलमा टिकट किनेर सांसद् बन्नेहरुको संख्या नेपालमा नौलो होइन । यो हामीले विगतमा देखे भोगेका हौं भने आगामी दिनमा पनि यो दोहोरिने पक्का छ ।
नेपालमा पनि व्यवसायीहरु सत्ताको चरम दुरुपयोग गरेर अनुचित व्यावसायिक लाभ लिन मरिहत्ते नै गर्न थालेका छन् । राजनीतिक दलका नेताहरुले पनि व्यवसायीसँग अनुचित लाभ लिने र सत्तामा पुगेपछि त्यसको गुन तिर्ने प्रवृत्ति दिनानुदिन बढ्दो छ । जसकारण नेपालमा आसेपासे पुँजीबाद अर्थात् क्रोनि क्यापिटलिज्म झाँगिदै गएको छ । जब जब कम्युनिष्टहरु सत्तामा पुग्छन् तब तब क्रोनि क्यापिटलिज्म मौलाउँछ ।
आसेपासे पुँजीबादका कारण सत्तासँग पहुँच नहुने गरीबहरु झन् झन् गरीब बन्दै गएका छन् भने सत्तासँग पहुँच हुने मुठ्ठीभर व्यवसायी र दलालहरु राज्यको स्रोत र साधनको चरम दुरुपयोग गरी रातारात अर्बपति बनिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनको सरकारसँग नजिक भएर यति ग्रुप, ओम्नी ग्रुप लगायतका केही व्यवसायीहरुले राज्यको स्रोत र साधनमाथि नियन्त्रण गर्दै आएका छन् । क्रोनि क्यापिटलिज्मले जरा गाडीसकेके हाम्रो अर्थतन्त्रलाई यसबाट उम्किन ठूलै संघर्ष गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
व्यवसायीहरु सरकार र शक्तिमा भएकाहरुसँग नजिकिन चाहनु नराम्रो होइन । स्वभाविक नै हो । तर सत्ता, शक्ति र सरकार यदि व्यवसायीले चलाउन थाल्यो भने के अवस्था हुन्छ भन्ने कथा आज हामी तपाईंलाई भन्दैछौं ।
कथा हो, ३ जना भारतीय व्यवसायी र दक्षिण अफ्रिकी सरकारको ।
कथा यसरी शुरु हुन्छ ।
सन् २०१३ को अप्रिल महिनाको एक विहान । हल्का गर्मी थियो । स्थान थियो दक्षिण अफ्रिकाको राजधानी प्रिटोरियाको भीआइपी एक एयर बेस । जसलाई वाटरलुप भनिन्छ । जब कोही विदेशी राष्ट्राध्यक्ष दक्षिण अफ्रिका आउँछन् । उनीहरुको विमान त्यही अवतरण हुन्छ । जसलाई असाध्यै धेरै सुरक्षा प्रदान गरिन्छ ।
उक्त एयर बेसमा एकदिन एयरबस ए ३३०–२ विमान अवतरण भयो । त्यो भारतीय विमान थियो । उक्त विमानभित्र २१७ जना सवार थिए । सबैजना असाध्यै धनी थिए । एक से एक राम्रा कपडा, गहना लगाएर साजसज्जाले युक्त थिए । यी सबै मानिस एक विवाह कार्यक्रममा सहभागी हुन आएका थिए ।
उनीहरुको ४ दिने कार्यक्रम थियो । सबै पाहुनाको व्यवस्थापन सन सिटी लक्जरी रिसोर्टमा गरिएको थियो । उनीहरुलाई त्यहाँ लैजानका लागि एसयूभी सवारी तम्तयार थिए । यतिसम्म कि पाहुनाको कारको अगाडि स्थानीय प्रहरीको निलो बत्तिवाला सवारीले सुरक्षा दिइरहेको थियो । यी सबै पाहुना एक यस्तो परिवारका थिए, जो देशका राष्ट्रपतिलाई समेत आफनो खल्तीमा राख्ने क्षमता राख्थे । यो भारतीय मूलकि भिंगा गुप्ताको विवाह कार्यक्रम थियो ।
२० वर्षमा के हुनसक्छ ? उक्त सवालको जवाफ तपाईं दर्जनांै तरिकाले दिन सक्नुहुन्छ । तर जुन जवाफ हाम्रो साथमा छ, त्यो कोही अरु कसैले खोज्दा भेट्न सकिन्न ।
दुई दशक पहिलेसम्म भारतको उत्तर प्रदेशको एक सानो जिल्लाको सानो परिवारमा सीमित केही मानिसहरु अहिले दक्षिण अफ्रिकामा मजबूतमात्रै नभई सबैभन्दा शक्तिशाली परिवार बनेको छ ।
वर्ष १९९३ मा भारतमा एउटा चलचित्र आएको थियो । घर आया मेरा दोस्त । फिल्म आयो तर चलेन । यसै वर्ष ३ जना भारतीय पनि परदेशी भएका थिए । हामी कुरा गरिरहेका छौं, गुप्ता परिवारका अजय, अतुल र राजेश दाजुभाईको कथा ।
जसले दक्षिण अफ्रिका पुगेर एक साम्राज्य खडा गरेका छन् । मह बाहेक हरेक कुराको सकिने एक मिति हुन्छ । यतिबेला गुप्ता परिवारको शक्ति सकिने दिन आएको थियो ।
दक्षिण अफ्रिकाको बबण्डर, केन्द्रमा ३ भारतीय
दक्षिण अफ्रिाकाका राष्ट्रपति थिए ज्याकोब जुमा । उनी को हुन सबैलाई थाहा छ । उनले बाध्यतामा परेर राजीनामा दिनु पर्यो । उनीमाथि भ्रष्टाचार गरेको आरोप लाग्यो । त्यसमा केन्द्रित थिए गुप्ता परिवार । अजय गुप्ता, अतुल गुप्ता, राजेश उर्फ टोनी गुप्ता ।
यो मामिला के हो । कति ठूलो हो, यो सबै जान्नका लागि तपाईंले गुप्ता परिवारको कथा सुन्नु पर्छ । उनको यात्राको विगत थाहा पाउनु पर्छ । ताकी उनको खास कुरा पत्ता लगाउन सकियोस् । यस कथाको नायक र खलनायक दुवै खास उनीहरु नै हुन् ।
ठेगानाः जिल्ला सहारनपुर
भारतको उत्तर प्रदेशमा एक जिल्ला छ, सहारनपुर । भारतको राजधानी दिल्लीबाट निस्केर हिमालयको नजिक जाँदा देहरादुनभन्दा पहिले आउँछ, सहारनपुर ।
त्यहाँ बस्थे शिवकुमार गुप्ता । त्यहाँ उनको सानोतिनो धन्दा थियो । खनिजको पाउडरबाट बनेको सोपस्टोन बिक्री गर्दथे । शिवकुमार गुप्ताका ३ छोरा थिए । अजय, अतुल र राजेश ।
बाबुको सहयोगका अलावा उनीहरुले दिल्लीमा एक कम्पनी पनि चलाएका थिए । जसको नाम थियो– एसकेजी मार्केटिङ । यस एसकेजी कम्पनीको बिस्तार गरे । त्यहीबाट शिवकुमार गुप्ता बने । उनले विदेशबाट मसला मगाउने गर्दथे । मडागास्कर जस्ता देशबाट मसला ल्याएर बिक्री गर्दथे । व्यापारको सिलसिलामा ३ भाई नै दिल्ली आउजाउ गरिरहन्थे ।
समयकालसँगै ३ भाई विदेशको यात्रा तय गरे । एकजना रुस, एकजना चीन र एकजना दक्षिण अफ्रिका पुगे ।
त्यो बेलामा भारतीयहरु अमेरिका र क्यानडा जान्थे । रुस र चीनमा पनि राम्रै आउजाउ हुन्थ्यो । तर शिवकुमार गुप्ताले भने आफ्ना छोराहरुलाई दक्षिण अफ्रिका जान भनिरहन्थे । उनलाई दक्षिण अफ्रिकामा अब धेरै सम्भावना छ भन्ने लाग्थ्यो ।
सन् १९९४ः जब दक्षिण अफ्रिकामा पात्र बदलियो
त्यो बेलामा दक्षिण अफ्रिाकामा सम्भावना बढ्दै थियो । लामो संघर्ष पछि देशमा रंगभेदी आन्दोलनबाट अश्वेतले उनीहरुको अधिकार पाएका थिए । खासमा उनीहरु समान भएका थिए ।
अर्थात् गुप्ता परिवार त्यहाँ जानु र दक्षिण अफ्रिाका परिवर्तन आउनुको उमेर करिब करिब बराबर नै थियो । दुबैको हामी उमेर सम्झौ । अर्थात् १९९४ मा दक्षिण अफ्रिकामा पहिलो लोकतान्त्रिक निर्वाचन भयो । तारिख थियो, २७ अप्रिल ।
उक्त चुनावले दक्षिण अफ्रिकाको इतिहास नै बदलिदियो । पहिलो पटक हरेक नश्ल, हरेक रंगका नागरिक एक साथ मिलेर आफनो सरकार छान्दै थिए । १९ राजनीतिक पार्टीले चुनावमा सहभागिता जनाएका थिए । करिब २ करोड २० लाखले मतदान गरे ।
अफ्रिकन नेशनल कङ्ग्रेसः नाम नोट गर्नुस्
सबैभन्दा बढी भोट पाएर जुन पार्टीले जीत निकाल्यो अफ्रिकन नेशनल कङ्ग्रेसले । कंग्रेसले ६२.६५ प्रतिशत मत पाएको थियो । सो पार्टीका नेता थिए, नेल्सन मण्डेला । अश्वेत आन्दोलनका नायक मण्डेला । महात्मा गान्धीका खास चेला ।
मण्डेला दक्षिण अफ्रिकामा पहिलो राष्ट्रपति बने । जुन देशमा गान्धीलाई गान्धी बनाउने शुरुवात गरिएको थियो ।
दक्षिण अफ्रिकामा जब लोकतन्त्र आयो र विकासको काम शुरु हुन थाल्यो । तब माइलो भाई अतुल गुप्ताले पनि त्यहाँ पुगेर व्यापार गर्न थाले र व्यापारका सिलसिलामा राजनीतिक नेता तथा सरकारसँग पनि नजिक हुन थाले । माइलो भाइको बढ्दो प्रगति देखेर उनलाई साथ दिनका लागि दाई र भाई रुस र चीनबाट दक्षिण अफ्रिका पुगे ।
माइलो भाई अतुल शुरुवाती समयमा एक जुत्ताको पसल शुरु गरेका थिए । त्यसपछि उनले एक कम्पनी शुरु गरे । त्यसपछि सारहा कम्प्युटरको काम शुरु गरे । जुन कम्पनीले विदेशबाट सस्तो मूल्यमा कम्प्युटरका पार्टपुर्जा ल्याउँथे र कम्प्युटर तयार पारेर बिक्री गर्थे । अतुलको काम चल्यो ।
त्यतिबेला रुस र चीनमा रहेका अयज र राजेशको खास काम भएको थिएन । यस्तैमा एक दिन उनीहरु पनि दक्षिण अफ्रिका आए । सो समयसम्म अतुल पहिचान निकै बढेको थियो ।
ठूल्ठूला सरकारी अधिकारी, नेतासँग उनको राम्रै उठबस थियो । सबैभन्दा नजिकको सम्बन्ध एएनसीको साथमा नै थियो । हो, त्यही हो नेल्सन मण्डेलावाला पार्टीबाट दक्षिण अफ्रिाकाको उपराष्ट्रपति थिए थे थावो मबेकी । थाबो र अतुलको असाध्यै नजिकको स्म्बन्ध बनेको थियो । राम्रो दोस्ती भएको थियो ।
वीरबलको होइन राजनीति र व्यापारको खिचडी
आम मानिस भन्छन् कि तपाईं हिन्दुस्तान छाडिदिनुस् । तर, तपाईंलाई हिन्दुस्तानले छाड्दैन । तपाईं गुप्ता परिवारको यो कथा पढ्ने समयमा यो कुरा लगातार महसुस गर्नुहुन्छ । हाम्रो फिल्ममा पनि यस्तै देखाउन खोजिन्छ । कुनै नेता तथा व्यापारी पर्दा पछाडि साल्सा गरिरहेका हुन्छन् । गुप्ता दाजुभाईले पनि यही सूत्र प्रयोग गरे ।
उनीहरुले सोही सूत्र प्रयोग गरेर एएनसीमा राम्रो पहिचान बनाए । बाँकी अन्य पार्टीसँग पनि उनीहरुको सम्बन्ध राम्रो थियो । व्यापारीहरु यस्तै गर्छन् । आज एउटा छ, भोलि अर्को हुन्छ । यही कुरालाई ध्यानमा राखेर सबैसँग राम्रो सम्बन्ध बनाएर उनीहरु अगाडि बढ्छन् ।
तर, गुप्ता दाजुभाईले भने नजिकको सम्बन्ध ज्याकोव जुमासँग बनाए । जुमा लगातार ९ वर्ष राष्ट्रपति भए । यही कुरा नै गुप्ता दाजुभाईका लागि सबैभन्दा राम्रो सावित भयो ।
जब ज्याकोव राष्ट्रपति बने
१९९९ को जुनमा नेल्सन मण्डेला सत्ताबाट बाहिर गए । उनको स्थानमा राष्ट्रपति बने थाबो मबेकी । तारिख थियो १६ जुन, १९९९ । उपराष्ट्रपति बने ज्याकोव जुमा । उनी सन् १९९९ देखि २००५ सम्म उपराष्ट्रपति भए ।
२००५ मा थाबोले ज्याकोबलाई वर्खास्त गरिदिए । उनीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लाग्यो । ज्याकोबका सहयोगीलाई घुस लिएको अभियोगमा पक्राउ गरिएको थियो । तर, ज्याकोवको भाग्य राम्रो थियो । गम्भीर आरोपका बावजूद २००७ मा उनी एएनसीको अध्यक्ष बन्न पुगे ।
दक्षिण अफ्रिकाको उच्चअदालतका न्यायाधीशले थाबोको विरुद्धमा फैसला सुनाए । भनियो कि उनले जाँच एजेन्सीको काममा दख्खल दिइयो । ज्याकोवको विषयमा पनि परीक्षण प्रभावित गर्ने कोसिस गरियो । यस्तैमा हल्लाकोबीतमा थाबोले राजीनामा दिनु पर्यो ।
सन् २००९ को मे मा आम चुनाव भयो । ज्याकोवको नेतृत्वमा रहेको एएनसीले निर्वाचन लड्यो । पार्टीले जीत निकाल्यो । ज्याकोव राष्ट्रपति बने ।
यी त्यही ज्याकोब थिए, जसले एकपटक एचआइभीमाथि चुट्किला भनेका थिए । तपाईं यदि एचआइभीबाट बच्न चाहनुहुन्छ भने यौन सम्पर्कपछि नुहाउनु होस् । त्यसपछि केही हुन्न । जसले आफनो घर सजाउनका लागि सरकारी स्रोतको खर्च गरेका थिए । पछि उनले पैसा नै फिर्ता गर्नु नै पर्यो । उनीमाथि बलात्कारको आरोपसमेत लाग्यो ।
यता गुप्ता परिवारको कारोबार, उनको सम्पत्ति तीव्र गतिमा बढिरहेको थियो । कम्प्युटरबाट शुरु भएको यात्रा माइनिङसम्म पुग्यो । फेरि मिडिया कम्पनी । २४सै घण्टा सञ्चालन हुने समाचार च्यानल । अखबार पनि । जसरी जसरी गुप्ता परिवारले प्रगति गरे, उसैगरी ज्याकोव जुमा पनि धनी हुँदै गए ।
१९९० को दशकदेखि हालसम्म ज्याकोवको परिवारका सदस्यलाई गुप्ता परिवारले आफनो कम्पनीको उच्चतहमा राख्दै गए । उनको छोरा, जुम्ल्याहा बहिनी, उनका चार श्रीमतीमध्ये एकले उच्चतहमै रहिरहे ।
भन्छन् नी कुनै पनि जित अति नै भयो भने, त्यो असाध्यै खराब हुन्छ । गुप्ता तथा जुमा परिवारको सम्बन्ध आफनो गतिमा चलिरहेको थियो ।
तर, गतिले माथ गर्यो । गति त सधै नै रहने नै भयो ।
स्पिड थ्रील्स बट किल्स भने जस्तै यस मामिलमा पनि त्यस्तै भयो । डिसेम्बर, २०१५ को कुरा हो । दक्षिण अफ्रिकाका अर्थमन्त्री नाहनला नेने थिए ।
राष्ट्रपति ज्याकोव जुमाले नेनेलाई वर्खास्त गरिदिए । मिति थियो, ९ डिसेम्बर, २०१५ । उक्त दिन दक्षिण अफ्रिकाका मिडियाले नेनेगेटको नाम दिए । अमेरिकाको वारगेट स्क्याण्डल जस्तै ।
यो मामिला ठूलो सावित भयो । यसमा ज्याकोव जुमा तथा गुप्ता परिवार सबैभन्दा बढी चुके । सो काण्डको दाग असाध्यै गहिरो हुनगयो ।
नागरिकले सवाल गर्न थाल कि देश को सबैभन्दा ठूलो पदमा भएपनि भरोसायोग्य हुन सकेनन् । आफू र आफना मित्रको फाइदाका लागि हद दर्जामा पुगे । देश चलाउनका लागि पैसा जरुरी पर्दछ । सोही कारण अर्थमन्त्रालय नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन जान्छ ।
सोही कारण अर्थमन्त्रालय सबैभन्दा महत्वपूर्ण विभाग हुन जान्छ । तर यो विभाग एक व्यापारिक कम्पनीको मुठ्ठीमा चल्न थाल्छ । सोही कारण यस्तो देश कसरी अगाडि बढ्ला त ? दक्षिण अफ्रिकामा यस्तो ठूलो धन्दाको सवाल वर्षेनी उठ्दै आएको छ । ज्याकोव जुमाको विरुद्धमा प्रदर्शन शुरु हुन गयो ।
गुप्ता परिवारको विरुद्ध विवरण आउन थाले
नेनेका सहयोगी थिए, मेकबिसी जोनास । उनले सोधीखोजी गर्दा हरेक पटक गुप्ता परिवारकोे नाम लिएका थिए । नेनेलाई बर्खास्त गर्नुभन्दा पहिले गुप्ता भाईले जोनासलाई बोलाएका थिए । जोनासका अनुसार गुप्ता परिवारले उनलाई एक अफर गरेका थिए । उनीहरुले ३ अर्ब १८ करोड बराबरको घुस दिन्छौं, हाम्रो काम हुनुपर्यो । त्यसका लागि मात्रै २ शर्त थियो । जुन उनीहरुले मान्नुपर्नेछ र आज्ञाकारी हुनु जरुरी छ ।
गुप्ता परिवारले जोनासको बयान खारेज गरिदिए । उनले भने की जोनाससँग कहिल्यै कोही कसैले पनि भेटघाट गरेको छैन । तर, जब परीक्षण भयो, तब फोन रेकर्डमा जोनासको कुरा सही सावित भयो ।
नेनेका पछाडि दक्षिण अफ्रिकाको अर्थमन्त्री बने डेविड वैन रुयन । बढी भन्दा बढी मानिसले यसअघि कहिल्यै उनको नामसमेत सुनेका थिएनन् ।
त्यतिमात्रै होइन, उनको साथमा वित्तीय मामिलाको कुनै अनुभव थिएन । उनी केवल ३ दिनमात्रै सो पदमा काम गरे । डेविट आफैंले भने अनुसार अर्थमन्त्री बन्नुभन्दा अघिल्लो रात उनी गुप्ताको घर गएका थिए ।
खबर अनुसार नेने चाहँदैन थिए कि दक्षिण अफ्रिाका र रुसबीच परमाणु सम्झौता होओस् । उनकै कारण उनी हटाइए । प्रवीणसमेत यस न्यूक्लियर डिलबाट पछाडि हटिरहेका थिए ।
खासमा कुरा र खेल यही थियो । किनकी गुप्ता परिवारको एक कम्पनीले दक्षिण अफ्रिकाको एक सरकारी बैंकको करिब १ अर्ब ३६ करोड बराबरको ऋण लिएका थिए ।
देशभित्र यूरेनियमको खानी खरिदका लागि ऋण लिइएको थियो । गुप्ता परिवार माइनिङ अर्थात् खानी उत्खनन् लागि फिल्डमा समेत काम गरिरहेका थिए ।
कयौ खानीको उनीहरुकोे कब्जामा थियो । तब खबर यो आयो कि गुप्ता दाजुभाई रुसको साथमा न्यूक्लियर डिल अगाडि बढाइरहेका छन् । ज्याकोेव जुमाले उनको मद्दत गरिरहेका थिए । आफूले भनेको मान्ने मान्छेलाई अर्थमन्त्री बनाउने उनीहरुको चाहना थियो, किनकी उनीहरु सोही डिलमा काम गरिरहेका थिए ।
हामीले माथि विवाहको एक किस्सा सुनाएका थियौं । कि कस्ता पाहुना भरिएका विमान उक्त एयरबेमा अवतरण गरेको थियो । ती सबै मानिसहरु गुप्ता परिवारका पाहुना थिए ।
विवाहको व्यवस्था असाध्यै आलिशान थियो । चर्चा त्यसमा नै बढी थियो, जुन विषयमा गुप्ता परिवार जोडिएका थिए । चर्चा त्यसमा भन्दा बढी अरु विषयमा पनि थियो ।
मामिला ज्याकोव र गुप्ता परिवारको सम्बन्ध एकाएक पारदर्शी लाग्न थालेकामा थियो । एक व्यापारीका लागि एयरबेसमा जहाज अवतरण गर्ने अनुमति कसरी मिल्यो ? उनीहरु यति ठूला भीआइपी कसरी भए । यति धेरै शक्तिशाली कसरी भए ? यी सबै सवाल आए । तर उत्तर भने कतैबाट आएन ।
१९ अक्टोबर २००९ देखि १४ अक्टोबर २०१६ को समय दक्षिण अफ्रिकाको पब्लिक प्रोटेक्टर थिए थुली मैडोनेसेला । यो पद असाध्यै विशेष थियो ।
यसको खास काम भने सही वा गलत काम माथि नजर राख्नु नै थियो । गुप्ता परिवार ज्याकोव जुमाको साँठगाँठ खुल्दै आएको छ । मैडोनसेलाको कार्यकालको आखिरी दिन थियो । उनले फैसला गरे कि यस बाँकी रहेको समयमा नेनेलाई बर्खास्त गर्ने विषयमा परीक्षण गर्नुपर्छ । कि नेनेलाई किन हटाइयो । जब यो विषय सार्वजनिक भयो । तब मैडोनसेलालाई ज्यान मार्ने धम्की आउन लाग्यो ।
तर पनि मैडोनसेला अडिग रहिन् । जुन दिन उको कार्यकाल सकिदै थियो, त्यसको ठीक एकदिन पहिले उनले ३५५ पाना एक परीक्षण प्रतिवेदन दिए । यो अक्टोबरको कुरा थियो । ज्याकोवले आफनो पूरा तागत लगाएर प्रतिवेदन रोक्न चाहेका थिए । पूरा जोडबल गरेपनि त्यो नाकाम सावित भयो । मैडोसेलाले परीक्षण गरे । गुप्ता भाई तथा उनका सहयोगीको मोबाइल फोन रेकर्ड समेत पत्ता लगाएका थिए ।
गुप्ता दाजुभाईको ज्याकोवका छोरा डुडुजेनसँग राम्रो सम्बन्ध थियो । करिब १३ वर्षसम्म गुप्ताका लागि काम गरे । गुप्ताको ११ वटा कम्पनीमा डुडुजेनको नाम छ । गुप्ता परिवारको साथमा झण्डै १ खर्ब भारु बराबरको सम्पत्ति रहेको छ । बैंक अफ बडौदाले गुप्ता परिवारको बैंक खाता बन्द गरिदियो । विपक्षी पार्टी, सत्तारुढ पार्टीका कयौं नेताले गुप्ता परिवारको विषयमा छानबिन गर्न माग गरिरहेका छन् ।
गुप्ता परिवारको विरुद्धमा अनेकौं उजुरी रेको छ । उनीहरु खराब तरिकाले फस्दै गएका छन् । उनीहरुको विरुद्धमा अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ ।
ज्याकोव जुमाको सहयोगमा खडा गरिएको साम्राज्य खडा गरेका थिए । त्यो साम्रज्य करिब ध्वस्त हुने अवस्थामा पुगेको छ । जुन दिन ज्याकोवले राजीनामा दिए, त्यसदिन गुप्ता परिवारको एक सदस्यको गिरफ्तारी गरियो ।
दक्षिण अफ्रिकामा उनीहरु माथि जुन आरोप लागेको छ । त्यो सावित भएको खण्डमा कानूनका सामू बच्न मुस्किल छ । उनीहरुको साथ अब सत्ताको सहारा समेत बाँकी रहेको छैन ।
हम दिल दे चुके सनममा अजय देवगन भन्छन् जुन सिँढी तलबाट माथि जान्छ, त्यही सिढीबाट तल पनि आउँछ । यस्तै भएको छ दक्षिण अफ्रिकाको सत्ता हल्लाउने गुप्ता परिवारलाई । सायद यसैलाई भन्छन् होला कर्म अनुसारको फल ।
पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईका अनुसार नेपालमा भर्खरै कृषिप्रधान अर्थतन्त्रको विघटन भएर औद्योगिक, व्यापारिक वित्तीय अर्थतन्त्रको विकास हुँदैछ । यसक्रममा नेपालमा पनि सीमित शहरी क्षेत्रहरूमा औद्योगिक, व्यापारिक र वित्तीय पुँजीवादको विकास हुँदै गइरहेको छ ।
तर, यहाँ केही विशिष्ट कारणहरूले गर्दा प्रतिस्पर्धी र प्रगतिशील प्रकारको पुँजीवादभन्दा अलि विकृत, पराश्रित राज्यसत्तासँग साँग गाँठ गर्न र उत्पादनमुखीभन्दा दोहनकारी अथवा ‘रेन्ट सिकिङ’ प्रकृतिको पुँजीवादको विकास भइरहेको अवस्था छ ।
तैपनि ठूलो मात्रामा राज्यसत्ता र निजी व्यवसायीहरूको साँठगाँठमा व्यवसायहरू सञ्चालन भएको छ । निश्चित व्यवसायीहरूले त्यसबाट लाभ लिएका छन् । साथै राजनीतिक दल, दलका नेताहरू र राज्यसत्ताको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरू र कर्मचारीहरूले ठूलो मात्रामा आर्थिक लाभ लिएको स्पष्टै देख्न सकिन्छ । हालसालै चर्चामा आएको यति होल्डिङ्सलाई राज्यको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति र पार्टीहरूले विभिन्न ढङ्गले सहुलियत दिएको र त्यसबाट अर्बौ रूपैयाँ राज्यलाई नोक्सान भएको घटनाहरू त्यसैका जीवन्त उदाहरण अंग हुन् ।
डा. भट्टराईले आफ्नो अर्थ राजनीतिक विमर्श नामक पुस्तकमा उल्लेख भएअनुसारगोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टलाई ६ वर्ष समय बाँकी छदै ऐनकानुन नै संशोधन गरेर नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्नु यसको उदाहरण हो । त्यसरी नै दरबारमार्गमा रहेको नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति अनियमित तरिकाले यति होल्डिङ्लाई नै दिनु र सगरमाथा संरक्षित क्षेत्रमा अनधिकृत ढङ्गले उही कम्पनीलाई दिनु पनि उदाहरण नै हुन् ।
केही वर्षयता भएका एनसेल लाभकर प्रकरण, बुढीगण्डकी काण्ड, वाइड बडी प्रकरण र यस्ता थुप्रै काण्डहरू प्रायः सबै पार्टीका नेताहरू नेतृत्वमा भएको बेलामा भएको हामी देख्न सक्छौं । यसले नेपालमा क्रोनी क्यापिटालिज्म नराम्रोसँग झाङ्गिएको र यसले एकप्रकारको क्यान्सरकै रूपमा लिएको प्रष्टै देख्न सकिन्छ ।
सँगसँगै भर्खरै आन्दोलनबाट आएको राजनीतिक नेतृत्व सत्तामा पुग्दा हिँजोको नैतिक उत्प्रेरणा र प्रतिबद्धताबाट स्खलित हुने र भौतिक उत्प्रेरणामा आधारित उपभोक्तामुखी संस्कृतिले गाँजेर छिटो धनी हुने प्रवृत्तिले गर्दा भ्रष्टीकृत राजनीतिक नेतृत्व र असक्षम र कमजोर व्यावसायिक घरानाबीच साँठगाँठ भएर यस्तो क्रोनी क्यापिटालिज्म विकास भएको अवस्था पनि छ ।
चौथो कारण, राज्य पुँजीवादलाई समाजवाद देख्ने एकथरी पुराना कम्युनिस्टहरूको दृष्टिदोष पनि हो । हिँँजो एउटा कालखण्डमा एकाधिकार पुँजीवादको विरुद्धमा राज्य नियन्त्रित समाजवादी प्रणालीको प्रयोग विभिन्न देशहरूमा भए । उत्पादनका साधनहरूलाई राज्यले नियन्त्रणमा लिने र अर्थतन्त्रलाई केन्द्रिकृत ढङ्गले सञ्चालन गर्ने विधि प्रयोगमा आयो । तर त्यसले सुरुको चरणमा केही लाभ दिए पनि अन्ततः त्यो प्रणाली राज्य पुँजीवादमा विकृत र भ्रष्टीकृत भएर अगाडि बढ्न सकेन । विघटित भएको सोभियत सङ्घ र पूर्वी युरोपले यो कुरा देखाइसकेका छन् ।
पहिलो: राजनीतिक प्रणालीमा सुधार
अहिले विद्यमान खच्चड प्रकृतिको संसदीय शासकीय स्वरूप र मिश्रित प्रकारको निर्वाचन प्रणालीले भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिएको छ । चुनाव लड्ने बेलामा नै यतिधेरै खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ कि त्यतिबेला व्यापारिक घरानासम्म पुगेर अपारदर्शी ढङ्गका चन्दा असुली नगरीकन वा कुनै घराना धनाढ्य व्यक्तिको आड नलिएसम्म चुनाव जित्नसक्ने अवस्था छैन ।
त्यहीँबाट भ्रष्टाचार र अनियमितता शुरु भएर क्रोनी क्यापिटालिज्मको बिजारोपण हुन्छ । यसर्थ, नेपालको विद्यमान शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीलाई बदल्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली र पूर्ण समानुपातिक संसद रहने व्यवस्था गर्नु अत्यावश्यक छ । यो नै नेपालमा नीतिगत भ्रष्टाचारको जड भएको हुनाले त्यसको अन्त्यको निम्ति राजनीतिक प्रणालीमा आमूल सुधार नगरेसम्म क्रोनी क्यापिटालिज्मको जरा काट्नु असम्भव देखिन्छ । व्यावसायिक घरानाको आड लिएर चुनाव जित, त्यो गुन वा ऋण तिर्न थप भ्रष्टाचारको निम्ति सत्तामा जाऊ र सत्तामा गएर थप भ्रष्टाचार गर भन्ने दुश्चक्र संस्थागत बनेको छ । त्यसको अन्त्य गर्नु पहिलो आवश्यकता हो ।
दोस्रो: कर्मचारीतन्त्र, कानून र न्यायालय
नेपालमा कमजोर पुरानै प्रकारको प्रक्रियामुखी कर्मचारीतन्त्र छ । त्यस्तै दोहनकारी कानून, प्रक्रियामुखी न्यायालयलगायतका जुन संरचना छन् यिनलाई आमूल परिवर्तन नगरेसम्म देशमा औद्योगिक पुाजीवाद र प्रगतिशील खुला अर्थतन्त्रको विकास हुन गाह्रो छ । त्यसका लागि कर्मचारीतन्त्रलाई प्रक्रियामुखी सट्टा परिणाममुखी कार्यगत एकाइ प्रणालीमा बदल्ने, चरम कर्मकाण्डी न्यायालयलाई विकासमुखी न्यायालयमा रूपान्तर गर्ने र समग्र प्रशासनयन्त्रलाई विकासमुखी प्रशासनमा बदल्ने काम अत्यन्त जरुरी छ ।
त्यहीअनुसारका नियम-कानुनहरू बनाउने र पारदर्शी तथा प्रतिस्पर्धीज्ञ व्यवसाय सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने ढङ्गको संस्थाहरूको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । साथै, सबै क्षेत्रमा बलियो रूपमा विधिको शासन कायम गरेर आर्थिक–राजनीतिक क्षेत्रको विसङ्गति अन्त्य गर्नु आवश्यक छ ।
तेस्रो: बलियो भ्रष्टाचार निरोधक संयन्त्र
अहिलेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता संस्थाहरू अत्यन्त कमजोर अवस्थामा छन् । तिनले सत्तामा रहेका उच्च राजनीतिक नेतृत्व र प्रभावशाली शक्तिहरूलाई कारबाही गर्ने हैसियत राख्दैनन् । किनभने तिनको जुन संवैधानिक, कानूनी व्यवस्था र व्यावहारिक ढङ्गले नियुक्ति प्रक्रिया छ, यसबाट ठूला र शक्तिशाली माछालाई कारबाही गर्न सक्ने हैसियत तिनलाई प्रदान गर्दैन । तिनले खाली झिंगेमाछा र हद भए विपक्षी राजनीतिक नेता र सेवानिवृत्त कर्मचारीलाई मात्रै तर्साउने वा कारबाही गर्न सक्ने हैसियत राख्दछ ।
त्यस अर्थमा, एउटा निष्पक्ष, स्वतन्त्र र बलियो भ्रष्टाचार निरोधक संयन्त्र निर्माण गर्न अत्यन्त जरुरी छ । त्यसको निम्ति प्रत्यक्ष जनता अथवा संसदप्रति उत्तरदायी हुने र सबैलाई कारबाही गर्न सक्ने लोकपालको व्यवस्था नगरेसम्म क्रोनी क्यापिटालिज्मलाई नियन्त्रण गर्न असम्भव छ ।
चौथो: आर्थिक नीति र प्रणालीमा आमूल परिवर्तन
अहिलेको प्रकृत्तिप्रदत्त साधन स्रोत र जमिनलाई नै मुख्य सम्पत्ति मान्ने परिपाटी छ । त्यसको अन्त्य गर्न जमिनलगायतका प्राकृतिक सम्पदालाई राज्यको मातहतमा अथवा सार्वजनिक संस्था मातहतमा राख्ने र पैतृक सम्पत्तिमाथिको उत्तराधिकार अथवा बाआमाबाट छोराछोरीमा सम्पत्ति हस्तान्तरण हुने पद्धतिको अन्त्य गर्नुपर्छ । त्यसो नगरेसम्म समाजमा ज्ञान र श्रममार्फत् धन आर्जन गर्नुसट्टा जमिन र बाआमाको सम्पत्तिमा जोडिएर आर्थिक लाभ लिने प्रवृत्तिको अन्त्य हुँदैन । त्यो नभएसम्म एउटा उत्पादनमुखी, सिर्जनशील, खुल्ला, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र निर्माण हुन सक्दैन ।
त्यसैले देशमा आर्थिक क्रान्तिको निम्ति सबैभन्दा पहिले सम्पत्ति सम्बन्धमा आमूल परिवर्तन ल्याउनैपर्छ । त्यसको निम्ति अहिलेसम्मको सम्पत्तिको अभिलेखीकरण ठीक ढङ्गले गर्ने र कर नीति, राजश्व नीतिलाई बढी प्रगतिशिल र पारदर्शी बनाउने दिशामा गम्भीर कदम चाल्न आवश्यक छ । त्यसरी नै बैङ्किङ र वित्तीय प्रणालीमा सुधार र पुँजीबजारमा सुधार गरेर अर्थतन्त्रलाई बढी खुला, प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी बनाउने नीति अनुशरण गर्न आवश्यक छ ।
साथै, शिक्षा नीतिमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ । शिक्षामार्फत् नवप्रवद्र्धनको भावना, सिर्जनशील प्रवृत्ति, प्रतिस्पर्धी क्षमतामा वृद्धि र ज्ञान उद्योगतर्फ अभिमुखीकरण गराउनु आवश्यक छ । हाम्रो आर्थिक नीतिमा आमूल सुधार वा क्रान्तिकारी परिवर्तन नल्याएसम्म क्रोनी क्यापिटालिज्मको अन्त्य गर्न सम्भव छैन ।
पाँचौं: आम मानिसको संस्कार र संस्कृतिमा आमूल परिवर्तन
नेपालमा भर्खरै राजनीतिक लोकतन्त्र आए पनि हाम्रो संस्कार र संस्कृति पूर्ण लोकतान्त्रिक भइसकेको छैन । जसरी पनि रातारात धनी हुने प्रवृत्ति, अपारदर्शी ढङ्गले अकूत धन आर्जन गर्नेलाई पूजा गर्ने प्रवृत्ति कायम छ । राम्रो होइन हाम्रोलाई खोज्ने प्रवृत्ति र साना–साना कुरामा पनि विधिको शासन तोडेर भनसुन गर्ने संस्कारलाई नबदलेसम्म क्रोनी क्यापिटालिज्मजस्ता कुसंस्कार र विकृतिको अन्त्य गर्न सकिँदैन । त्यसका लागि काम गर्नेलाई सम्मान गर्ने र चोरी गर्नेलाई दण्डित गर्ने संस्कार सँगसँगै विकास गर्न जरुरी छ । मानिसको विचार, जीवनशैली र संस्कृतिमा नै आमूल परिवर्तन गरेर नै दिगो प्रकारले समाजमा आर्थिक विकृति विसङ्गति अन्त्य हुन सक्छन् ।
अन्त्यमा, क्रोनी क्यापिटालिज्मले क्यान्सरको रूप लिइसकेको अवस्थामा यसलाई झारफुक गरेर निको पार्न सकिन्न । क्यान्सर भइसकेपछि र क्यान्सर पनि उच्च अवस्थामा पुगिसकेपछि त्यसको उपचार भनेको गम्भीर प्रकृतिको शल्यक्रिया नै हो । त्यसैले नेपालमा छिटै क्रोनी क्यापिटालिज्मको शल्यक्रिया नगर्ने हो भने यसले हाम्रो समाज, अर्थतन्त्र र अन्ततः राजनीतिलाई नै धराशायी पार्ने गम्भीर खतरा छ । यसको निम्ति तलबाट होइन माथिबाट नै शल्यक्रिया गर्ने आँट गर्नुपर्छ ।